Turkiga ayaa mamnuucaya duulimaadyada tooska ah ee ka yimaada Bangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, iyo Sri Lanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bangladesh Wararka Wararka » Turkiga ayaa mamnuucaya duulimaadyada tooska ah ee ka yimaada Bangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, iyo Sri Lanka
Airlines • Airport • Aviation • Bangladesh Wararka Wararka • Brazil Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • Wararka Nepal • News • Waajib ah • Wararka Koofur Afrika • Wararka Sri Lanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Turkiga • Wararka kala duwan
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa soo saartay wareegto lagu sheegay in waddanku uu joojiyay duulimaadyadii ka imaanayay Bangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, iyo Sri Lanka laga soo billaabo 1-da Luuliyo iyo illaa amar dambe.
Wadamada qaarkood waxay muujiyeen koror dhawaanahan sababo la xiriira noocyada cusub ee fayraska COVID-19.
Turkigu wuxuu go'aansaday inuu xidho xuduudihiisa wixii toos ah ee soo galaya oo ay ka mid yihiin dhinaca dhulka, hawada, badda ama tareenka lix dal.
Socdaalayaasha imanaya Turkiga ee ka imanaya waddan kale ka dib markay soo mareen mid ka mid ah waddamadaas waxaa looga baahan doonaa inay keenaan natiijo diidmo ah oo COVID-19 ah oo la qabtay 72-dii saac ee la soo dhaafay.
Mas'uuliyiinta Turkiga ayaa ku dhawaaqay in Turkigu uu joojinayo duulimaadyada tooska ah ee ka imanaya lix waddan iyadoo loo eegayo noocyada cusub ee kiisaska fayraska COVID-19 ee gobolladaas.
Wasaaraddu waxay xustay in muddadii uu socday cudurkan faafa ee dalalka qaarkood ay muujisay koror dhawaanahan sababo la xiriira noocyada cusub ee fayraska COVID-19.
Iyadoo la raacayo talooyinka Wasaaradda Caafimaadka, Turkey go'aansaday in la xiro soohdimaheeda wixii gelitaan toos ah oo ay ka mid yihiin dhinaca dhulka, hawada, badda ama tareenka waddamadaas ka yimaada.
Soo-galootiga imanaya Turkiga oo ka yimid dal kale markay joogeen mid ka mid ah dalalkaas 14-kii maalmood ee la soo dhaafay waxaa looga baahan doonaa inay keenaan natiijo diidmo ah COVID-19 oo la qabtay 72-dii saac ee la soo dhaafay.
Sidoo kale waa la karantiilayaa meelaha ay go'aamiyaan gudoomiyeyaasha degmooyinku mudo 14 maalmood ah, marka ay dhamaato tijaabada diidmada ah ayaa loo baahan doonaa hal mar oo dheeri ah.
Haddii ay dhacdo natiijada baaritaanka togan, bukaanka waxaa lagu hayn doonaa go'doomin, taasoo ku dhammaan doonta natiijo taban 14ka maalmood ee soo socda.
Wareegtada wasaaradda ayaa intaas ku dartay in rakaabka imanaya Turkiga ee ka kala socda Ingiriiska, Iiraan, Masar, iyo Singapore looga baahan doono inay helaan natiijo diidmo ah oo COVID-19 ah oo la helay saddexdii maalmood ee ugu dambeysay.
Socdaalayaasha imanaya Turkiga ee ka imanaya dalal aan ahayn Bangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, UK, Iran, Egypt iyo Singapore, kuwa bixin kara dukumiinti muujinaya maamulida COVID-19 tallaalka 14-kii maalmood ee la soo dhaafay ama ka soo kabashada infekshanka COVID-19 lixdii bilood ee la soo dhaafay looma baahna inuu soo bandhigo natiijada baaritaanka ama la karantiilo.
Natiijada baaritaanka COVID-19 ee xun ee la sameeyay 72-dii saac ee la soo dhaafay ka hor inta aysan imaan Turkiga ama baaritaanka antigen ee deg degga ah ee lagu sameeyay ugu badnaan 48 saacadood ka dib imaanshahooda ayaa ku filnaan doona kuwa ku guuldareysta inay keenaan dukumintiyada.